Vista's Colorful Planet: February 2010
Labels: Mandalay, Miscellaneous 15 comments | Links to this post
ဘလက်ကီ နဲ့ ဘော်ဘီ ( သို့ ) The canines I loved (3)
ဘလက်ကီမရှိသည့်နောက်ပိုင်းမှာ မှဘော်ဘီအိမ်ပြန်လာသည် ။ဘယ်မှမသွားတော့။
သူ့ ကိုစောင့်ရှောက်ထားသည့်ရဲဘော်တွေ ဂိတ်ကိုတော့
တစ်နေ့ ၂ ခါလောက်သွားသည်။ ခဏနေပြီးပြန်လာ သည်။
အိမ်မှာ အချစ်တော်နေရာကို ဆက်ခံတော့သည်။
အရင်ကတည်းက ဘလက်ကီက ဖေဖေ့ကိုကပ်တာများပြီး ဘော်ဘီက သူမ နှင့်တွဲဖက် မို့ 
သူမ စာအုပ်ဖတ်နေလည်း အနားမှာ ဝပ်နေတတ်တာဘော်ဘီ။
ကျောင်းအပြန်ကျောပိုးအိတ် သယ်ပေးတာဘော်ဘီ ။
စက်ဘီးနောက်တင်ပြီး စီးသေးသည် ။မနိုင်တော့ နှစ်ယောက်လုံးလဲကွဲ ။
ဘော်ဘီဟာ ကြင်နာတတ်တယ် လူခင်တယ် ၊ ကြောင်တွေကိုလည်းခင်တယ်။
သူမကြောင်လေးတွေ ပေါက်ပြီ ဆိုဘော်ဘီကချောင်းနေတော့တာ။
ကြောင်မကြီးက ကြောင်လေးတွေ နေထုတ်ပြပြီဆိုရင် စွတ်ဆိုပေါက်ချလာရော ။
ကြောင်မက သူ့ ကလေးတွေကိုက်မှာစိုးလို့ အော်လိုက် ရန်လုပ်လိုက်ပေါ့ ။ ဘော်ဘီကတော့ကြောင်လေးတစ်ကောင်စီ ဂုတ်ကဆွဲချီလို့ မြက်ခင်းပေါ်ချ သေချာလျှက်ပေးပါတော့တယ်။
ကြောင်လေးမှာ သားရည်တွေရွဲလို့ ရယ်လေ။
ကြောင်အမေကြီး ကတော့ ဒေါတွေဖောင်းလို့ သူ့ သားသမီးတွေကို ပြန်လျှက်တော့တာပေါ့။
ဘော်ဘီလူခင်တဲ့ နေရာမှာ ဖက်ဖက်တက်တတ်တာက တော်တော်ဆိုးတာ။
တစ်နေ့ အိမ်လာလည်တဲ့ အန်တီတစ်ယောက်ကို ပြေးပြီး ဖက်တက်လိုက်တာ ၊ ဟိုက နှလုံးရောဂါသည်လေ။
အမလေးဆို မေ့သွားလို့ ဆရာဝန်ပင့်လိုက်ရပါရောလား။
ကံကောင်းလို့ လူသေမှုမဖြစ်တယ် ။ချစ်တတ်တာတွေ အဲလို။
့သူမတို့ မြို့ လေးမှာဘော်ဘီ နာမည်ကြီးလာတာပေါ့။
အဲဒီတုန်းက German Shepherd ( အယ်လဇေးရှင်း) တွေ များများမရှိကြသေး။
ခွေးထီးပိုင်ရှင်တွေ က လှလှထွားထွားဘော်ဘီ့ ကို မျက်စိကျကြလို့ 
ဖေဖေ နှင့်မေမေကို လာနားဖောက်ကြတာ။ မေမေတို့ လည်းငြင်းတန်ငြင်းပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ သူမတို့ နှစ်အိမ်ကျော် က ဖေဖေ့ မိတ်ဆွေကြီး အိမ်က သူခွေးကြီးနဲ့ စပ်လိုကြောင်း စကားစလာတော့
ငြင်းမကောင်းသူမို့ ဖေဖေက ၊ အပြတ်မငြင်းလိုက် ၊
ဒါပေမယ့်သူတို့ ပြောသလိုတော့ ကားဂိုဒေါင်ထဲ တူတူထည့်ထားပေးဖို့ ငြင်းလိုက်ပြီး ၊
“ ရမ်ဘို “ ကို အိမ်ဘက်လွှတ်လွှတ်ပေးပါလို့ ပဲပြောလိုက်တယ်လေ။
သူတို့ ခြင်းကြိုက်ရင်ယူပေါ့ ။
တစ်နေ့ တော့ “ ရမ်ဘို “ က ရစ်သီရစ်သီနဲ့ခြံရှေ့ လူပျိုလှည့်ရန်ရောက်အလာ ..
ဘော်ဘီက တွေ့ သွားပြီး အပြင်ထထွက်သွားတော့ ...
သူမက အမယ်တယ်ဟုတ်ပါလားဆိုအကဲခတ်နေစဉ် ၊
တစ်ခါတည်းတစ်ရူးထိုးလိုက်ကိုက်သည်မှာ ရမ်ဘို ကရှေ့ ကပြေး ဘော်ဘီက နောက်ကလိုက်နဲ့။
ရမ်ဘိုက သူ့ ခြံတံခါးဖွင့်ထားလို့ အထဲဝင်ပြေးပါတယ် ဘော်ဘီကနောက်ကလိုက်ကိုက်ပြီး ခြံထဲ က အလှစိုက် နှင်းဆီတွေ သစ်ခွအိုးတွေအကုန်ကျိုးပဲ့. ရမ်ဘိုလည်း စုတ်ပြတ်ထွက် ။
နောက်လည်း အဲအိမ်က စပ်ဖို့ စကားမစလာတော့ ၊ ဖေဖေလည်း မျက်နှာမပျက်ကြအောင်အတော်လေးပြောဆိုလိုက်ရတာပေါ့။
အိမ်မှာတော့ချီးကျုးနေတာလေ .. ဒါမှ ငါ့သမီးဘော်ဘီတဲ့။ ဟိဟိ။
ဒီလိုနဲ့ဘယ်ခွေးနဲ့ မှ စပ်မရတဲ့ အပျိုမ ဘော်ဘီပေါ့။
တွေ့ ဆုံခြင်းအစ ခွဲခွာခြင်းအဆုံး
တစ်နေ့ မှာတော့ဘော်ဘီနဲ့ ခွဲကြရဖို့ ဖြစ်လာတော့တာ။
ဖေဖေက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်တော့မှာတဲ့ဘယ်နှနှစ်ကြာမယ်မသိနှိင်ပါတဲ့
၅ နှစ်သော်လည်းကောင်း ၁၀ နှစ်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်မှာ မို့ 
အစစလုပ်ရမှာတွေ ၊ သွားရမယ့်နေရာကလည်းဝေးဆိုတော့ ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းက ယူမယ်တဲ့ ။
ဒီလို နဲ့ ရန်ကုန်က ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းဆီရောက်ခဲ့တာပေါ့။
အဲဒီ ဦးဦးက မူးယစ်တပ်ဖွဲ့ မှာအရာရှိလေ။
သူကဘော်ဘီ့ကို မြင်တော့ ဖေဖေ့ကိုတစ်ခုတောင်းဆိုတယ် ၊
နိုင်ငံတော်အတွက် အသုံးချ မလားတဲ့ ။ သူမက နားမရှင်းလို့ ဖေဖေက ရှင်းပြတယ်။
မူးယစ်ဆေးရှာတဲ့ခွေး အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပေးလိုက်မလားလို့ မေးတာတဲ့။
သူတို့ ဟာရာထူးလည်း ရတယ် ၊ အစားလည်း ရာရှင်နဲ့ ကောင်းကောင်းရတယ်။
သေချာလည်း သင်ကြားခံရတယ်တဲ့ ။ဒီလိုခွေးမျိုးတွေဟာအသိဉာဏ် မြင့်လို့မူးယစ်ဆေးရှာတဲ့နေရာမှာအရမ်းအသုံးကျတယ်တဲ့။
အများကြီးလည်းမထားပဲ သေချာလက်သပ်မွေးထားတာမို့ 
ပေးမလားဆိုတော့ ၊ သူမတို့ ကလည်း ခွဲထားရတော့မှာ မထူးဘူးလေ ဆိုပြီး ပေးမယ်ပေါ့။
သူတို့ သင်တန်းမှာ သင်လို့ ရမရအရင်စစ်သေးတယ်လေ ။
ထူးခြားတာက ဘော်ဘီဟာ သူမတို့ ဘယ်လို မှမတတ်နိုင်လို့ ထားခဲ့ရမှာကို
တစ်ပတ်လောက် အင်းစိန်ဘက်က အဲဒီ တပ်မှာထားခဲ့ပြီး တော့ အိုကေတယ်ဆိုမှ ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမ သွားနုတ်ဆက်တော့ ဘော်ဘီ့ကို သင်ပေးမယ့် အထိန်းတပ်ကြပ်ကြီး နဲတွေ့ တယ်လေ ။
ဘော်ဘီဟာသူမကို စိုက်ကြည့်နေပုံက စိတ်မပူနဲ့အိုကေတယ်ဆိုသလိုပဲ။
အမြီးလုပ်ပြ လျှာတွဲလဲနဲ့ လေ။သူမတိုြ့ပန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ယူလို့ မရတော့ဘူး ။
ဘော်ဘီက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားပြီတဲ့ ။
အသက်ပြည့်လို့ ပင်စင်ပေးမှ ပြန်ယူချင်ယူတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ မျက်စိတစ်ဆုံးလိုက်ကြည့်နေတဲ့ဘော်ဘီကို ထားခဲ့ရတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ နှစ်တွေကြာပြီး သူမ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခေါက်ပြန်ခဲ့တယ်။
ဘော်ဘီ့ အကြောင်းစုံစမ်းတော့ ဒီနာမည်နဲ့စစ်ခွေးမရှိဘူးတဲ့ ရယ်။
စိတ်တွေညစ်လို့ ဖေဖေက သူ့ မိတ်ဆွေကနေ စုံစမ်းမှ ဘော်ဘီ ရှိတဲ့ နေရာကိုသိရတယ်လေ။
နာမည်ပြောင်းထားတာတဲ့ “မေရီ“တဲ့ ၊ အလဲ့။
ဘော်ဘီက မူးယစ်ဆေးရှာတာမှာ စွမ်းစွမ်းတမန်စွမ်းဆောင်နိုင်လို့ 
ရာထူးတက်တက်သွားတာ အခုတပ်ကြပ်ကြီး တဲ့။
ထူးခြားချက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းဘယ်ခွေးထီးမှ အနားကပ်မရတဲ့ အပျိုကြီးတဲ့ ။
နှစ်တွေဘယ်လိုကြာပေမယ့် “ မေရီ“ ခေါ်ဘော်ဘီ ဟာသူမကိုမှတ်မိတာပဲ။
ချက်ခြင်း နားရွက်ကြီးထောင်တက်သွားလိုက်တာတွေ့ တော့ ခွေးများအင်မတန်
သစ္စာရှိတယ် ဆိုတဲ့စကားကို ၁၀၀ ရာနှုန်းထောက်ခံမိတော့တယ်။
ခပ်မတ်မတ်ရပ်နေရာက ဘော်ဘီလို့ ခေါ်သံကြားတော့ပြေးလာ ခုန်တက်လိုက်တာ
သူမမှာ လည်းဝမ်းသာမျက်ရည်တွေ ရွှဲလို့ ရယ်။
အသက် ၁၀ နှစ်ကျော် မှာ တပ်ထဲမှာပဲ နေမကောင်းလို့ ဆုံးပါတယ်။
သူ့ ကိုပင်စင်ပေးရင်ပြန်မွေးမလို့ စောင့်နေပေမယ့် ဆုံးပါးသွားတော့
ဒါပေမယ့် သူမဘဝမှာ အချစ်ဆုံးခွေး နေရာမှာ အမြဲ ရှိနေပါတယ်။
Labels: animals, Dogs 19 comments | Links to this post
ဘလက်ကီ နဲ့ ဘော်ဘီ ( သို့ ) The canines I loved (2)
သူတို့ ကိုယဉ်ပါး အောင်လုပ်နိုင်မှ အိမ်ထဲခေါ်လို့ ရမှာမို့ 
မကြောက်မရွံ အနားကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးသွားလိုက်တော့ ......
ချာတိတ် ၂ကောင် အနက်က
အမည်းရောင်များများပါတဲ့အကောင်လေးက ” ဂီး ဂဲ ” ဆို ထလာတော့သည်။
အဝါရောင်များများစပ်သော အကောင်လေးကတော့ အသံမထွက်ပဲ စိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်။
သူမကလက်ဖျောက်လေး တီးရင်းထိုင်ချလိုက်တော့ အမည်းကောင်လေးက “ ဝုတ် “ ဆိုတစ်ချက်ဟောင်ပြီး နေရာမှာထိုင်ချ ကာရှေ့ ဆက်မတိုးလာပဲ
နားရွက်ဖားဖားတွေကို အစွမ်းကုန်ထောင်ကာအသင့်အနေအထားနဲ့ ။
ထိုအချိန်မှာ အဝါရောင် အကောင်လေးက ” အီအီ “ ဟုအော်ရင်း
အမြီးအနည်းငယ်နန့် ကာ အရှေ့ လျှောက်ထွက်လာသည်။
မိတ်ဖွဲ့ ချင်သည့်သဘော ၊ သူမက တိရစ္ဆာန်တွေ အထာကို ငယ်ငယ် ထဲက နပ်သူမို့အဝါလေးကိုလက်ဖျောက်တီးခေါ်လိုက်သည်။ ဘယ်လက်ကိုလည်း ဆန့် တန်းထားလိုက်သည်။ သူလေးလာရင်လာပါ ကြိုဆိုတယ် ရန်မပြုဘူးဆိုသည့်သဘောပေါ့။
များမကြာမှီ အဝါလေးက သူမနားရောက်လာတော့ သူမက ခေါင်းလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်
လည်ပင်းလေး ကုတ်ပေးလိုက် နှင့်မိတ်ဆွေ ဖြစ်သွားတော့သည်။
များသောအားဖြင့် ခွေးတွေက လူစိမ်းတစ်ယောက်
နားရွက်ကိုင်တာ မကြိုက်တတ်ကြ ... လှမ်းကိုက်တတ်သည်၊
ဒါကတော့ သူမ အတွေ့ အကြုံကရတဲ့ သင်ခန်းစာပေါ့။
မကြာခင် အမည်းလေးက ဖယ်တယ် ဖယ်တယ် နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းတော့သည်။
ဒီကောင်လေး ငယ်ငယ်ထဲက စွာတာတာ ၊ အထီးလေးမို့ ဂျစ်တစ်တစ် ။
အဝါရောင်တွေများတဲ့ အမလေးက ပိုချစ်စရာကောင်းပြီး ရင်းနှီးလွယ်သည်။
သူတို့ နဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်အကြာမှာ
လူကြီးတွေ ဆူညံ ဆူညံနဲ့ ရောက်လာသည်။
သူမပျောက်သွားလို့ လေ ၊ ဒါပေမယ့် အကြောင်းသိသောမေမေက
ဒီဘက်လစ်သွားတာ နေမှာပဲဆို တော့စိတ်ပူပူနဲ့ လိုက်လာကြ တာ။
သူတို့ လာတော့ အစောက အသံတိတ်နေတဲ့ ခွေးလေးတွေက ထိုးဟောင်တာ ဝက်ဝက်ကိုကွဲရော ။
( သူမလည်းတော်တော်လေး အဆူခံလိုက်ရသေးသည် ၊ အတင့်ရဲလွန်း လို့ ။)
ဒီလိုနဲ့အိမ်ဘက်ကို ခေါ်လာပြီး ကားဂိုဒေါင်မှာထားခွင့်ရသွားကာ ၊
သူမကပဲ အစာကျွေး ရေတိုက်လုပ်ပေးရသည်။
သူတို့ နဲ့ ဒုတိယ မြောက် ရင်းနှီးမှုရလာသူကတော့ ဖေဖေပေါ့ ။
အထီးလေး အမည်းရောင်တွေများများပါသူလေးကို “ ဘလက်ကီ “ ၊
အမလေး အဝါရောင်များများစပ်သူလေးကို “ ဘော်ဘီ “
ဟု အမည်သညာ ခေါ်စရာ ပေးလိုက်ကြသည်။
အကောင်လေးတွေကကြီးမြန်လိုက်တာမှ အသက် ၅ လ လောက်မှာတောင် အတော့်ကိုထွားနေပြီ ။
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အမျှ အသိတရား အရမ်းတိုးလာသည်။
ဘလက်ကီက ကိုရွှေလည် ၊ လူတွေကို ချွဲပတ်သလောက် ဘော်ဘီ့ကို အနိုင်ကျင့်လာသည်။
ဆူမရ ရိုက်မရ ၊ တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်။
သူတို့ က ဖေဖေ့ အချစ်ကို ပြိုင်လုကြသည်မှာ လူတွေ ထက်တောင် သိတတ်သေးတော့သည်။
ဖေဖေ ဂေါ့ဖ်ရိုက်သွားရင် တစ်ကောင်ကလက်အိပ်ယူပေး ၊
တစ်ကောင်က ဖိနပ်ယူပေးနဲ့ ၊တော်တော့်ကို အမြင်ကပ်စရာ ။
အရင်က သူမတို့ လုပ်ပေးနေကြကို သူတို့ ကတွေ့ သွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ
ရုံးပြန်လာရင် အိတ်သယ်ပေးသူကပေး ၊ ဖက်တက်သူကတက် ။
ဘလက်ကီက အလည်အပါး ၊ ဖေဖေ့ရှေ့ မှာဘော်ဘီ့ကိုဘယ်တော့မှ မကိုက်။
လစ်တာန့ဲ တော့ဆော်လိုက်တာပဲ။ဘော်ဘီ့ ခမျာလူမဟုတ်တော့ ပြန်မတိုင်တတ်လို့ ခံရရှာသည်။
အကောင်ချင်းကမတိမ်းမယိမ်းပေမယ့် ဘလက်ကီက အထီးပီပီ ပိုသန်သည်။
တစ်ခါ များမေမေ့ကို ဖက်တက်တာနောက်တောင်ယိုင်လဲသည်။
ကြာလာတော့ ဘော်ဘီ အိမ်မကပ်တော့ ။ အိမ်အနားမှာရှိတဲ့ စစ်တပ် ဂိတ်နားသွားနေသည်။
အဲဂိတ်က ရဲဘော်တွေက သူ့ ကိုချစ်ကြတာကိုး။
သူမကလည်း ကျောင်းတစ်ဖက်မို့ အမြဲကြည့်မနေနိုင်ပေ။
အိမ်အကူ အစ်မကလည်း သာမန်ကရှန်ကာပဲ ထမင်းစားပြန်မလာရင်လိုက်မခေါ်ပဲ
ရဲဘော်တွေကလည်းသူ့ ကိုချစ်ကြတဲ့ဘဝမှာ ထမင်းဝအောင်မစားပဲ ကျွေးကြရှာသည်။
နောက်တော့ အိမ်အကူအမကို ခွေးစာကျိုပြီးတိုင်းမှာ ဂိတ်ကိုသွားပေးခိုင်းရသည်။
အိမ်မှာ မင်းမူသူဆရာကြီးကတော့ ဘလက်ကီပေါ့ ။
ဘလက်ကီနဲ့ရွှေကြာစစ်ပွဲ
အဲဒီမှာ ဗိုလ်ဗိုလ်ချင်းတွေ့ ကြတော့တာ။
အရင်က အိမ်မှာ ရွှေကြာကဗိုလ်လေ ။ ဖေဖေ့ အချစ်တော်မြင်းပေါ့။ တစ်ကိုယ်လုံး မန်ကျည်းစေ့ရောင်ပြောင်လက်နေတာမှာ နဖူးမှာပဲ ကြာဗွေအဖြူလေးနဲ့ မို့ ရွှေကြာတွင်သူပေါ့။
သူက နေ့ လည်ဆို လျှောက်သွားတတ်သည် ၊
ဇောင်းမှာ မနေ ပဲ အေးရာအေးကြောင်းသွားနေတတ်သည်။
တစ်ခါတစ်လေ စစ်တပ် နားကချောက်ထည်းက ဆီးပင်အောက်သွားပြီး ဆီးသီးမြုံ့ တတ်သေးသည်။
သူမတို့ အိမ်ရှေ့ မှာ သဲကျင်းလေးရှိတယ်လေ ၊ အဲဒါလေးကို
ဖေဖေ မအားလို့ ဂေါက်သွားမရိုက်ဖြစ်တဲ့ 
ကားမောင်းတဲ့ ဦးလေးက ညှိထားပေးလေ့ရှိသည်။
အဲဒီသဲကွင်းလေးမှာ မှ ကိုရွှေကြာက ကျောယားဖျောက်တော်မူသည်။
ကားမောင်းတဲ့ဦးလေး လစ်တာနဲ့ ရောက်လာပြီး လူးလိမ့်ကာ အယားဖြေတော့သည် မှာ ညီညာသောသဲပြင်တစ်ခုလုံး လကမ္ဘာအသွင်ပြောင်းတဲ့အထိ။
အဲဒီ ဦးလေးနဲ့ ရွှေကြာက တစ်ရန်ပေ့ါ ။နောက်တော့ အဲဒီ ဦးလေးက ဘလက်ကီ့ကို
သင်ထားတယ်လေ ၊ရွှေကြာ ဒီ သဲကျင်းနားလာရင်ဟောင်ဖို့ ။
ဒီလိုနဲ့ရက်တော်တော်များများ အဆင်ပြေနေတော့တယ်။
သူမြက်ခင်းနားရစ်သီလိုက်တာနဲ့ ဘလက်ကီက အတင်းထိုးဟောင်တော့ ရွှေကြာလည်း စိတ်လေပြီးထွက်ထွက်သွားတာပေါ့။
ဒါပေမယ့်...ရက်တွေကြာလာတော့ ရွှေကြာက ရိုးလာရော
၊ ဒီခွေးက သူ့ ကိုဟောင်ယုံပဲ မကိုက်ဘူးဆိုတာ ရိပ်မိလာရော
ဘလက်ကီကလည်းဒေါသအိုးကွဲဆိုတော့ ဟောင်လိုက် အနားသွားလိုက်
ခြေလေးဟက်မလို လုပ်လိုက်နဲ့ ။
သူမက အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ရှေ့ ထွက်လာတာ
နားညီးလို့ ရွှေကြာကိုမောင်းမလို့ ၊အဲဒီအချိန်မှာ ရွှေကြာက သဲကွင်းပေါ်ရောက်နေပြီ ၊
ဘလက်ကီ က လည်းအရမ်းတင်းပြီး နောက်ခြေထောက်ကို ဆွဲလိုက်တာမှာ
သတိအနေအထားရှိနေတဲ့ ရွှေကြာက ကန်ထည့်လိုက်ပါလေရော။
သူမမြင်လိုက်ရတာကတော့ “ဂိန်“ဆိုလွင့်သွားတဲ့ မည်းမည်းအကောင်လေးပေါ့။
ရွှေကြာက ကန်လိုက်ပြီးတော့ သဲကွင်းပေါ်က ဆင်းသွားပါတယ်။
ရုပ်ကလည်း ကျောင်းမှန်ကန်မှန်းသိပလားဆိုတဲ့ ပုံပေါ့ ။
ဘလက်ကီက လွင့်သွားရာက လူးလိမ့်ထ ခပ်တည်တည်နဲ့ 
သူမကို အမြီးနန့် ပြပီးလာသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်ဘက်မျက်လုံးအောက်နားမှာကွဲပြီးသွေးတွေ တစက်စက်နဲ့ လေ။
ကုလိုက်ရတာ ၁ လလောက်နေမှပျောက်တော့တယ်။
သူမမှာ အဲဒီတုန်းက ယုန်လေးတွေလည်းရှိတယ် ၊
ယုန်လေးတွေရန်သူတော်ကတော့ ဘလက်ကီပေါ့ ၊
ယုန်ခြံကို အနားကပ် မြေကြီးကို တွင်းတူး ၊ နှတ်သီးကြီး ထိုးထည့်ပြီး “ ဝုတ် “ ဆိုဟောင်လိုက်တာနဲ့အသည်းငယ်တဲ့ ကိုရွှေယုန်တစ်ကောင်တော့ ရှောပြီးသားပဲ။
တစ်ညနေသူမ ယုန်လေးတစ်ကောင်သေပြန်လို့ ငိုနေတုန်း စစ်တပ်ဂိတ်က
ရဲဘော်တစ်ယောက် ဟင်းလာယူချိန်နဲ့ တွေ့ တယ်။
မေမေက သူတို့ ကို ဟင်းအမြဲလိုလို တစ်အိုး( တစ်ပန်းကန် မလောက်ဘူးနော် )
ပေးလေ့ရှိတယ် ။ ဟင်းကောင်းမစားရလို့ သနားလို့ ဆိုပြီး။
အဲဒီရဲဘော် ဦးလေးက .. “ ဟယ် အငယ်လေး ဘာလို့ ငိုနေလည်းဆိုတော့ ၊ ကျနော့် ယုန်လေးသေပြန်ပြီ ပေါ့ “။
“ဟုတ်လား အငယ်လေးရယ် ဦးဦးစိတ်မကောင်းလိုက်တာ .. ပေးပေး ဦးဦးမြုပ်ပေးမယ်နော်“တဲ့ ။
သူမကလည်း ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပေးလိုက်တာပေါ့ ။
ဒီလို နဲ့ ယုန်လေးတွေ လန့် သေတယ်ဆိုတိုင်း အဲဒီဦးဦးက
နောက်မှ သိရတာက သူတို့ ကချက်စားတာကိုး။
ယုန်သား အရမ်းကောင်းဆိုပဲ ။
ဖေဖေ့ကို ခွင့်တောင်းပြီးမှ စားတာပါတဲ့ ။
ဖေဖေက ယုန်အသေမြုပ်ပစ်လည်း အလကားဖြစ်မယ့်တူတူ ၊
မင်းတို့ စားချင်တယ်ဆိုလည်းစားပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ကလေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ် မသိစေနဲ့ ဆိုလို့ လေ။
ကောင်းရော ။ တော်တော်ကြီးတော့မှ သိရတာ ။ဟွန်း။
ဒီလိုနဲ့သူမ ၂ တန်းအောင် ၃ တန်းရောက် ဘလက်ကီ တို့ ဘော်ဘီတို့ လည်းကြီးလာ ၊
ကံကြမ္မာငင်ချင်တော့ သူမတို့ မြို့ လေးမှာရှိတဲ့ တစ်ယောက်တည်းသော တိရိစ္ဆာန်ကုဆရာဝန်
နိုင်ငံခြား ခဏသွားတဲ့ အချိန် ဘလက်ကီ တစ်ကောင်အသည်းအသန်ဖျားတော့တယ်။
ဘယ်လိုမှ မသက်သာပဲ ကားဂိုဒေါင်ထဲ လှောင်ထားရတော့တာ။
သူမလည်းအနားမသွားစေဘူး ရူးတာလားမသိလို့ တဲ့ ။
သူမသွားကြည့်တော့ အကောင်းပဲ အားနည်းနေတဲ့ ပုံပဲရှိတာ ။
တစ်နေ့ ကျောင်းက အပြန်မှာတော့ဖေဖေက ရုပ်ရှင်ခေါ်သွားတယ်။
ညပြန်ရောက်တော့ ဘလက်ကီကို သွားကြည့်မယ်လုပ်တော့ မေမေ က ဘလက်ကီမရှိတော့ဘူးတဲ့ ။
ညနေက ဆုံးသွားလို့သူမစိတ်မကောင်းမှာစိုးလို့မတွေ့ ဖြစ်အောင်မြုပ်လိုက်ပြီတဲ့ ။
သူမ ဘယ်လို ခံစားရတယ်ဆိုတာ မပြောတတ်ဘူး ၊ ဒီအရွယ်တောင်ပြန်စဉ်းစားရင် ငိုချင်တယ်။
ဒီလိုမှန်းသိရင် ရုပ်ရှင်မလိုက်ပါဘူးလို့ တွေးမိတယ်။
သူ့ ကို အိမ်ဘေးက တောင်ကုန်းလေးနားမှာမြုပ်ခဲ့တာတဲ့။
“ သွားတော့ဘလက်ကီရေ “
Labels: animals, Dogs3comments | Links to this post
ဘလက်ကီ နဲ့ ဘော်ဘီ ( သို့ ) The canines I loved ( 1 )
သူတို့ နှစ်ယောက် သူမနှင့်စတင်တွေ့ စဉ်က သူတို့ အသက် ၂လ။
ဒီဇင်ဘာလ ချမ်းအေးသောဆောင်းတွင်းတစ်နေ့ သောကြာနေ့ ညနေ
ဖေဖေက မြင်းဇောင်းထဲမှာတစ်ခုခုလိုက်ကြည့်ဖို့ ခေါ်သည်။
ဘာကိုမှန်းမသိလိုက်လာခဲ့တဲ့သူမ နားရွက်ဖါးဖါး လက်ဆံခြေဆံကြီးကြီး
သူတို့ နှစ်ကောင်ကိုတွေ့ လိုက်တော့ အရူးအမူးပျော်ရွင်သွားသည်။
သူတို့ နှစ်ကောင်က သူမအတွက်ပထမဆုံး
German Shepherd ခွေးများပေါ့။
အရမ်းသနားစရာ သတ္တဝါလေး နှစ်ကောင်မှာ မြင်းစောင်းထဲမှာ ချမ်းတုန်နေခဲ့သည်။
ကောက်ရိုးတွေ၊ စောင်တွေနှင့်ဘယ်လိုထွေးပေမယ့် မိခင်ရင်ခွင်က
မို့ သူတို့ အမေခွေးမကြီးကို သူတို့ အဖေ ( သားစပ်တဲ့ခွေးထီး) အိမ်ကိုပေးခဲ့ပြီး ခွေးကလေးတွေကို ဖေဖေ့ကိုပေးပြစ်ခဲ့တော့တာ။
ဖေဖေက သူမတိရစ္ဆာန်ချစ်တတ်မှန်းသိလို့ ယူလာတာလေ။
ဒါပေမယ့် ရောက်စမှာ ဘယ်လိုမှထိန်းမရခဲ့ပါ။
လူတွေကို ကိုက်လိုက်ဆွဲလိုက် ၊
တစ်ညလုံး အော်လိုက် အူလိုက်နဲ့ဆူညံပွက်နေပုံမှာ သနားစရာ ။
အမေ့ကိုလွမ်းလို့ လား ၊
နေရာသစ်ကိုကြောက်လို့ လား ၊ ချမ်းလို့ လား မဆိုနိုင်ပါချေ။
မြင်းဇောင်းက အိမ်နဲ့ အတန်ဝေးတာတောင်မှ တော်တော်လေးကို ဆူညံအောင်ကြားနေရလေသည်။
မြင်းကြီး ရွှေကြာ ခမျှာလည်း တော်တော် နားညီးရှာသည် ထင့် ခြေတစ်ဆောင့်ဆောင့်နှာတစ်မှုတ်မှုတ်နဲ့ ။
အရင်က သူတစ်ယောက်ပဲမြင်းဇောင်းမှာ ဗိုလ်လေ ၊
အလှမွေးမြင်းမို့ ဘာမှလုပ်စရာမလို စားလိုက် ၊လမ်းလျှောက်လိုက် ၊ ပြန်နှပ်လိုက်နဲ့၊
အခု ဒီနှစ်ကောင် လာနေတော့မှ နားကလောတော့တာ။
သူတို့ နှစ်ကောင်ကလည်း ဒေါသအိုးကွဲတွေပီပီ ထမင်းလည်းမစား ၊
ဘယ်လိုမှကိုင်လို့ လည်းမရဘဲ ဟောင်လိုက် အူလိုက်နဲ့ နေလိုက်တာ ...
နောက်နေ့ မိုးလင်းရင်များ အသက်ပျောက်နေမလားတောင်ပူမိပါရဲ့။
နောက်နေ့ စနေနေ မနက် အသံလေးတွေတိတ်လို့..
သူမအလွန်စိတ်ပူပြီးနိုးနိုးချင်း မြင်းဇောင်းဘက်ထသွားလိုက်မိသည်။
ဖေဖေက လူကြီးမပါဘဲမသွားရန်မှာထား သော်လည်း မအောင့်နိုင်တော့လို့တိတ်တိတ်လေးထွက်လာမိသည်။
သူတို့ နှစ်ကောင်က မနေ့ က တွေ့ ရာလူကိုက်မည်လုပ်နေလို့ မြင်းဇောင်းမှာလှောင်ထားရတာကိုး။
ဒါပေမယ့် သူမစိတ်ထဲမှာတော့ ဒင်းတို့ ကိုစည်းရုံးလို့ ရမယ် ဆိုတာသေချာနေသည်။
မြင်းဇောင်းရောက်တော့ ရွှေကြာရဲ့ နှာမှုတ်သံ အမြီးရိုက်သံသာကြားရပြီး
ဟိုနစ်ကောင် အသံတိတ်နေလို့ စိတ်ပူစွာချောင်းကြည့်မိတော့
ခေါင်းလေးတွေ ချပြီးဝတ်လို့အမော့ဆို့ နေပုံပဲ။
ဒါပေမယ့် အာဂချာတိတ်တွေက သူမတံခါးကိုတွန်းဝင်လာတာမြင်တော့
” ဂီး ဂီး ဂီး“ လုပ်လိုက်သေး။ ဟောင်တော့မဟောင်တော့။
စောင်တွေလည်း ကိုက်ဖြဲထားလိုက်တာ သွားသေးသေးလေးတွေမို လို့ ပဲ။
နည်းနည်းများကြီးရင် ကာထားတဲ့တန်းကို ခုန်ကျော်ပြီး ရွှေကြာ့ကိုတောင်သွားကိုက်နေအုံးမလားမသိ။
မြင်းဇောင်းကတော့ ခွေးပေါက်လေးတွေ အတွက် ဘယ်လိုမှ သက်တောင့်သက်သာမရှိပါချေ။
အထူးသဖြင့် အခုလိုဆောင်းတွင်းကာလ နှင်းတွေ ဝေချိန်မှာဆို ပိုအေးတာ။
သူမက တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အလွန်အတင့်ရဲသူလေ။
မကြောက်မရွံ အနားကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးသွားလိုက်တော့ ......။
Labels: animals, Dogs5comments | Links to this post
Tim : Look at those thighs !! Look at those skin!!
Jean: Oh Tim, you make me blush!
Tim : This is the best Chicken rice I have ever had !
Tim : Working withaprofessional is reallyabless!
Jean : Oh, thank you Tim.!
Tim : Help me find one .
Tim: Jean likes all the short things! look at her skirts !
Jean : Yeah , that's why I like you Tim .( Tim is notatall guy )
ဒါကတော့ ကျနော်ညနေရုံးဆင်းရင်အမြဲနားထောင်နေကြ Radio Class-95 FM က Jean Danker နဲ့Tim Oh တို့ ရဲ့ ဟာသပျက်လုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ရင် မရယ်ရတော့မှာစိုးလို့ ဒီအတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အမြဲပဲခတ်နေတာ ကိုက ရယ်စရာပါ ။
Kumamoto Prefecture is located along the west coast of Kyushu Island
and blessed with awesome natural Beauty.
The capital is Kumamoto City.
Japanese fishermen with their fishing boat
Calm sea near Kumamoto Prefecture.
A pretty flower from Ashikita Town.
Labels: Japan2comments | Links to this post